China maska ​​solza 3 oz mametaka mpanamboatra sy mpamatsy birao ENEPIG | Kangna
PCB FR4 mahazatra
Birao hentitra mihetsika
Birao miorina amin'ny seramika
Birao mavesatra varahina
Birao avo Tg
solaitrabe miolikolika miaraka amin'ny famaranana ENEPIG
Mpanamboatra PCB mifaninana
Saron-tava solder 3 oz mametaka takelaka varahina mavesatra ENEPIG
Heavy Copper PCB dia ampiasaina betsaka amin'ny rafitra Power Electronics sy Power Supply izay misy ny fepetra takiana avo lenta na ny mety hisian'ny fitifirana haingana ny dian'ny hadisoana. Ny lanjan'ny varahina mitombo dia afaka mamadika ny takelaka PCB malemy ho sehatra fifamatorana maharitra, azo itokisana ary maharitra ary manadino ny filàna singa fanampiny lafo vidy sy be dia be toy ny filentehan'ny Heat, mpankafy sns
Tsy misy famaritana mahazatra momba ny Heavy Copper PCB, mazàna raha mihoatra ny 30z ny hatevin'ny varahina.
Ny tabilao dia faritana ho toy ny takelaka varahina matevina.
Fampisehoana takelaka varahina matevina: ny tabilao varahina matevina dia manana fisondrotana tsara indrindra, tsy voafetran'ny hafanan'ny fanodinana, ny teboka miempo ambony dia azo ampiasaina mitsoka oksizenina, ny maripana ambany dia tsy marefo ary ny fantsom-pandehanana mafana hafa, ary koa ny fisorohana afo, an'ny an'ny tsy -mba fitaovana tsy azo may. Ny takelaka varahina dia mamorona rakotra matevina, tsy misy poizina, na passivated, eny fa na dia amin'ny atmosfera tena manimba aza.
Tombontsoa amin'ny takelaka varahina matevina: ny vilia varahina matevina dia be mpampiasa amin'ny fitaovana isan-karazany ao an-trano, vokatra teknolojia avo lenta, fitaovam-piadiana, fitaovana ara-pahasalamana ary fitaovana elektronika hafa. Ny fampiharana ny takelaka varahina matevina dia manalava ny androm-piainan'ny circuit board izay singa fototra amin'ny vokatra fitaovana elektronika ,, ary miaraka amin'izay koa dia fanampiana lehibe hanamorana ny habetsaky ny fitaovana elektronika
Fanamboarana PCBs mavesatra
Ny famokarana PCB, na ny lafiny tokana na ny lafiny roa dia vita amin'ny fangarony varahina mba hanesorana ireo teknika varahina sy plating tsy ilaina hanampiana ny hatevin'ny fiaramanidina, pad, ary ny dian-tongotra ary ny plated-through-hole (PTH). Ny Fabrication of Heavy Copper PCB dia mitovy amin'ny fananganana PCB FR-4 mahazatra fa mitaky teknika fametahana sy elektrôlika manokana izay mampitombo ny hatevin'ny tabilao amboniny nefa tsy manova ny isa isa. Ny Surface Boards matevina dia afaka mitantana lanja varahina miampy noho ny teknika manokana izay misy haingam-pandeha haingam-pandeha, fametahana tena, ary ny moka na ny fiviliana.
Ny fomba fanao ara-dalàna dia tsy mandeha amin'ny PCB Heavy Copper ary mamorona tsipika tsy mitovy sy sisin-tany vita sokitra. Mampiasa teknika fandrosoana mandroso izahay mba hahazoana tsipika mahitsy sy sisin-tany tsara indrindra miaraka amina undercuts tsy azo tsinontsinoavina. Ny fizotran'ny plating aditive dia mampihena ny fanoherana ny dian-by amin'ny varahina amin'ny fanatsarana ny fahaiza-manao sy ny faharetana amin'ny fihenjanana amin'ny hafanana.
Ny Fampihenana amin'ny fanoherana ny hafanana dia manatsara ny fahafaha-manaparitaka ny hafanana amin'ny fizaran-tany amin'ny alàlan'ny fivarotana, ny conduction ary ny taratra. Ny Fabricators antsika dia mifantoka ihany koa amin'ny fanamafisana ny rindrin'ny PTH izay manararaotra tombony betsaka amin'ny fihenan'ny isan'ireo sosona ary ny fihenan'ny impedance, ny fanontana an-tongotra ary ny vidin'ny famokarana amin'ny ankapobeny. Mirehareha be amin'ny maha-iray amin'ireo mpanamboatra PCBs Heavy Copper mora vidy eran'izao tontolo izao izahay.
Na izany aza, ireo PCB ireo dia misy vidiny lafo kokoa noho ny PCB mahazatra satria matanjaka sy sarotra ny fizotra etching. Varahina be dia be no mila esorina mandritra ny fizotry ny Etching. Ary koa, ny fizotran'ny lamination dia mitaky ny fampiasana ny prepreg miaraka amin'ny atiny avo lenta ho an'ny famenoana ny elanelana misy eo amin'ireo dian-tongotra varahina. Ka ny vidin'ny fanamboarana dia ambony noho ny PCB tsy tapaka. Na eo aza izany dia ampiasainay ny Blue Bar Method sy ny Embedded Copper fomba hanomezana anao ny birao ambony amin'ny vidiny tsara indrindra.
Fampiharana PCBs mavesatra
Manamboatra sy manome ireto PCB ireto izahay izay misy matetika na tampoka ny fiakaran'ny maripana mahery sy mihombo. Ny ambaratonga faran'izay mahery vaika dia ampy hanimba PCB mahazatra ary miantso ny takiana Heavy Copper izay mampihena ny isan'ny sosona ihany koa, manome impedance ambany kokoa, ary mamela ny dian-tongotra kely kokoa sy ny tahirim-bola be. Ireto ambany ireto ny faritra sasany sy ny rindranasa izay ampiasaina ny PCB Heavy Copper:
• Rafitra fizarana herinaratra
• Modules Power Amplifier
• boaty fitobiana fizarana herinaratra mandeha amin'ny fiara
• Famatsiana herinaratra ho an'ny rafitra radara
• Fitaovana welding
• Rafitra HVAC
• Fampiharana herinaratra nokleary
• Fiarovana sy famindrana be loatra
• Rafitra herinaratra mandeha amin'ny lalamby
• Mpanamboatra tontonana amin'ny masoandro
Tao anatin'izay taona faramparany izay dia nitombo ny fangatahana an'ireo PCB ireo amin'ny fampiharana fanaraha-maso Automotive, Miaramila, solosaina ary indostrialy. Kangna dia efa niaina am-polony taona maro tamin'ny famokarana Heavy Copper PCB izay manana kalitao faran'izay avo. Ireo injenierantsika mahay dia natokana hahatratra ny fenitra avo indrindra ary hamorona Birao Premium izay mifanaraka amin'ny tanjon'ny fahombiazanao sy ny tanjonao hahazoana tombony. Fantatsika fa ny famolavolana PCB Heavy Copper dia misy fahasarotana fanampiny ary noho izany dia miresaka akaiky ny fanontaniana sy ny olana rehetra izahay alohan'ny hirosoana amin'ny famokarana.
Ny tena mampiavaka antsika dia ireo takelaka novolavolainay hamakivaky tsivalana fanamarinana kalitao isan-karazany alohan'ny hanaterana izany amin'ny mpanjifanay. Ny sampana fanaraha-maso kalitao ao an-trano dia miantoka ny kalitaon'ny PCB Heavy Copper ary manome antoka fa ny vokatra farany dia mifanaraka amin'ny kalitao faran'izay tsara ary tsy misy atahorana ny tsy fahombiazan'ny fizaran-tany.
Previous: Resin plugging hole Microvia Immersion volafotsy HDI miaraka amin'ny fandavahana laser
Manaraka: haingana multilayer High Tg Board misy volamena fanitrihana ho an'ny modem
Address:Rihana faha-4, tranobe A, ilany andrefana faha-2, làlana zheng Andrefana faha-2, Fianakaviana Shajiao, Tanàna Humen, Dongguan, Guangdong, Sina.